Izingubo Zabesifazane Zemfashini i-AR - Genova
Uhlelo oluqhubekayo: 09: 30-19: 30
Kulabo abathanda ubuhle kuzo zonke izici zayo.
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-118)
Izingubo Zabesifazane Abesifazane I-AR isitolo se izingubo a Genoa lapho ukuthola konkeizingubo futhi i izesekeli zea donna. Mi-aieria, igalofu, i-cardigan, amabhulukwe, izingubo, amahembe nokuningi ukuze uhlale unobuhle futhi ufashini.
Izambatho Zemfashini Zabesifazane base-AR - amabhulukwe namaKititwear eGenoa
Izingubo Zabesifazane Zemfashini i-AR iyisitolo esifanele wonke umuntu donna othanda ubuhle nobucwebe. Izinto eziningi izingubo ukuzivumelanisa nanoma isiphi isikhathi. Ibhulukwe ukusika okuvamile noma okubabazekayo, i-cardigan izingubo ezifashisayo noma eziyisisekelo, ukugqoka zonke izifiso. Izingubo Zabesifazane Abesifazane, njalo kuyinkomba yokuthi Genoa ezahlukene iziphakamiso ze izingubo zabesifazane, iyisitolo esiphelele salabo abafuna ukuvuselela ikhabethe labo noma bazinikele abafuna ukugqoka igalofu e i-cardigan mkhuba noma pantaloni kulunge ngokuphelele.
Izambatho Zemfashini Zabesifazane Base-AR - Izingubo eziseGenoa
Yiba izingubo ngemikhosi noma ngezingubo zokugqoka donna ukugqoka nsuku zonke ngezikhathi ezingekho emthethweni, kusuka Izingubo Zabesifazane Abesifazane a Genoa ungakhetha kusuka ku-assortment enkulu. Baningi izingubo etholakalayo kumakhasimende: ukugqoka sheath, izingubo ezimfushane zezimbali, izingubo nenhle futhi yesifazane, ngoba isifiso Izingubo Zabesifazane Abesifazane ukukhulisa nokugqoka ubufazi babo bonke abesifazane. Imikhiqizo emihle kuphela, ekhethiwe ngezimpawu zezinto zokwenziwa kanye nomsebenzi, ngenhloso yokunikela izingubo imfashini nekhwalithi ephezulu.
Izambatho Zemfashini Zabesifazane Base-AR - amahembe Nezesekeli eGenoa
Enye into yokugqoka yowesifazane ohlale efuna ukubabazeka nakanjani ihembe. Izingubo Zabesifazane Abesifazane inikeza amakhasimende ayo amamodeli amaningi we amahembe. Shizi ukugqokwa ngaphansi kwebhantshi, amahembe usilika noma ezinye izindwangu ezinhle, amahembe ezemidlalo nezinye iziphakamiso eziningi, esitolo esiseGenoa abasebenzi bazokwazi ukweluleka abathengi babo ngaso sonke isikhathi abanikeza isisombululo esifanele sonke isidingo. Izingubo Zabesifazane Zemfashini i-AR akayedwa izingubo zabesifazane kodwa futhi izesekeli ukuqedela nokucebisa zonke izinhlobo zokugqoka. Kuneziphakamiso eziningi ze- izesekeli avuselelwa ngeqoqo ngalinye elisha.
Izingubo Zabesifazane Abesifazane isitolo se izingubo a Genoa ezinikezelwe kubo bonke abesifazane abathanda ukunakekela ukubukeka kwabo futhi bahlala bebahle, begqoke izingubo ezinesitayela. Inikeza nge-assortment enkulu yosayizi namamodeli amahembe, igalofu, ama-cardigans, izingubo zokugqoka, ibhulukwe kanye namahembe. Esitolo ungathola futhi eziningi izesekeli njalo okusha, ngemibono yezipho noma ukucebisa ukubukeka okuhle ngokuphelele okunemininingwane.
Ikheli: Via Luccoli, 85 Bomvu
I-POSTAL CODE: 16123
Umakhala ekhukhwini: 348 3649006 Sabrina
Umakhala ekhukhwini: 338 3376753 Emanuela
Umakhala ekhukhwini: 392 4114878 (Isitolo Sempahla Yezitolo)
Iwebhusayithi: www. .isigoogle.com
Inombolo ye-VAT: 01673230999